पालतू र राइडिंग को रूप मा टनी सिकन | पालतू जनावर | डाउनलोडको लागि निःशुल्क रंगीन पृष्ठहरू
पालतू र राइडिंग को रूप मा टनी सिकन | पाल्तु जनावर र
एक टट्टू बच्चाहरु को शौक हो, तर सस्तो र सजिलो छैन
मद्दत, मेरो बच्चा जान्न जान्न चाहानुहुन्छ
यद्यपि जर्मनीमा टनी रवैया धेरै वर्षको लागि चिनिन्छ, एक टोनी लहरको जस्तै हामी माथियो। यो अक्सर एक राम्रो कुरा हो कि तपाईंको बच्चालाई जन्मदिन वा अर्को अवसर एक टट्टु दिनु, शायद एक कुट्च्वेगलगिन पनि।
बालबालिका र मलघटाना, तर: ponies धेरै जीवित ठाउँ चाहिन्छ
यसको साथ केही गलत छैन, किनकि यी उत्कृष्ट घोडाहरूसँग व्यवहार गर्दा बच्चाको लागि मात्र लाभदायक हुन सक्छ। तर दुर्भाग्यवश यो सानो घोडाहरूको मनोवृत्तिमा खराब पाप छ, जुन प्रायजसो पशु क्रूरतामा सिमाना हुन्छ। एकले frugal ponies कम गर्दछ र विश्वास गर्दछ कि उनि कम से कम खाना र हेरविचार संग प्राप्त गर्न सक्छन्। तिनीहरू साँच्चै निराश हुन्छन्; तर हरेक जनावरले यसको प्रजातन्त्र अनुसार एक स्वस्थ जीवन बिताउन एक निर्वाह स्तर चाहिन्छ। साथै हाम्रो सानो चट्टानहरू।
बच्चाहरूको लागि एक पाटोको रूपमा टाँस्नुहोस्
सुरुदेखि दायाँ, यदि एक सहरको बासिन्दासँग पर्याप्त भूमि छैन वा देशमा सापेक्ष छ भने, त्यो ponies को दृष्टिकोण संग व्यवहार गर्न सक्दैन। एक टट्टू, जस्तो कि मैले भने, ठाउँ चाहिन्छ - र सानो पनि। यो वसन्तबाट शरद ऋतुमा चरामा बाँच्न चाहन्छ। यसको नॉर्डिक मातृभूमिमा यो जाडो महिनाहरूमा पनि रहन्छ। त्यसैले यो स्थिर घोडा छैन!
निस्सन्देह हामी अझै स्थिर हुनु पर्छ जुन जाडो वा स्टोरेज खाना समायोजन गर्न पर्याप्त हुन्छ (घाँसको 30-35 सोनी)। र त्यो धेरै ठाउँ चाहिन्छ! यसले केही सौ पाउन्डको ओटमा लिन्छ; किनभने टट्टु एक्लै घाँसमा बाँच्न सक्दैन।
यसबाहेक, अझै पनि स्क्याटर आवश्यक पर्दाको लागि कोठा हो, किनकि एक टट्टू पनि न्यानो र नरम हुन चाहन्छ। हामी कामको घण्टा बारे पनि कुरा गर्न चाहँदैनौं, किनकि तपाईंले भर्खर दैनिक भाँडा सफा गर्न र ताजा स्ट्रालाई हटाउनु पर्छ। यसको अतिरिक्त, घोडा को आफु स्पष्ट हेरचाह आफु ब्रश र होरो संग, किनकि अन्यथा तपाईं जल्द नै एक शरारती, अचम्मलाग्दो जनावर हुनेछ।
एक सुन्दर टट्टुको खरीद संग केहि निश्चित अवस्थाहरु जोडिएको छ। नबिर्सनुहोस् कि ठूलो बगैंचा पर्याप्त छ। सबै भन्दा राम्रो, यो केही खरगोशहरूको लागि पर्याप्त छ, तर टट्टुको लागि होइन।
यो नोट शहरी बासिन्दाहरूको लागि ग्रामीण बासिन्दाहरूको भन्दा बढी छ, जसले सामान्यतया राम्रो परिस्थितिहरू प्रदान गर्दछ। र देशको नजिकै बाँच्नेहरूले पनि चराको खेतीमा भाडाको लागि आफ्नो घोडालाई समायोजन गर्ने तरिका खोज्न सक्छन्।
यो पनि याद छ कि एक टट्टू सस्ता छैन। के तपाईं एक आइसल्याण्ड, एक शेन्टलर वा नार्वेजियन किन्नुहुन्छ, तपाइँसँग एक जना पशुमा गणना गर्न सक्नुहुन्छ 750 यूरोको साथ - दौड, सवारी र स्थिरता ड्राइभिङ्गको आधारमा। यसको अतिरिक्त, त्यहाँ अस्तित्व, आपूर्ति, दुल्हन, काठी, गाई र लुगा संग लुगा लगाउने।
बाल र टट्टू
यद्यपि, यदि तपाइँ यी सबै कठिनाइहरूमा महसुस गर्नुभयो भने तपाईंले खरीद गर्न संकोच गर्नु हुँदैन। एक सस्तो घोडा किन्न को लागी प्रलोभन नगर्नुहोस्। सामान्यतया यसको पछि केहि छ। या पशु खराब छ वा यो बालबालिका होइन, एक बिल्ट, शायद बिरामी।
यो पनि सम्झनाको लागि तपाईंले टट्टु किन्न चाहनुहुन्छ कुन उद्देश्यको लागि सम्झना गर्नुपर्छ। बालबालिकाको गाडीको लागि, सबै भन्दा सानो चिसो पर्याप्त छन्। यदि तपाईं सवारी गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईंले आईस्लैंडिक् वा नार्वेजियन किन्नु पर्छ। यीसँग एक मीटर र यसको माथि केहि माथि उचाई छ।
प्रकृति अनुसार, पनी बच्चाहरु को शौक हो। बच्चाले टोनी संग एकैसाथ राम्रो तस्वीरको बारेमा सोच्न सक्छ। के यो हिउँदमा सवार छ भने, दुई चक्र गाडी वा सिउँदो सिलेजको छेउमा फैलिएको छ - यो सधैं मानिसको साँचो मित्र हो। यदि तपाईंसँग ठूलो बगैंचा छ भने, तपाईं बागवानीको लागि यो सानो घोडा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसको आकार र यसको फिड खपत अनुसार, यो ठूलो घोडाहरूमा प्रदर्शनमा अझ राम्रो छ।
अब तपाईं एक टट्टु कहाँ खरीद गर्न रुचि राख्नुहुन्छ। यहाँ तपाईंले विभिन्न पशु पत्रिकाहरू पाउनुहुनेछ जुन तिनीहरूको विज्ञापन खण्डमा प्यान्नीहरू प्रदान गर्दछ। साथै दैनिक समाचार पत्रहरूमा सानो घोडाहरू प्राय बिक्रीका लागि प्रस्तावित गरिन्छ।
विशेष गरी केटीहरुको लागि, सवारी जान्न चाहने इच्छा आफ्नो इच्छा सूचीको माथिमा छ। एक इच्छा जो आमाबाबु संग बहिरा कानमा पर्दैन, किनकी कुनै पनि अन्य खेलले आंदोलन को संयोजन, जिम्मेवारी को भावना र प्रकृति को प्यार को रूप मा धेरै को रूप मा समानता को जोड दि्छ।
यदि बच्चाहरू जान्न चाहान्छ भने
समीकरणको सुन्दरता पनि हो, परिवार सप्ताहांतमा एकसाथ आउछ र प्रकृतिको आनन्द उठाउन सक्छ।
सानो टट्टू सवारहरू
सबै भन्दा सानो टट्टू घुमिरहेको छ। Shetland ponies यहाँ सर्वोत्तम उपयुक्त छ, किनभने तिनीहरूका सानो स्टिक आकार बच्चाहरु को अनुपात मा तुलना गर्दछ। त्यसैले सवारीको कुनै डर छैन र मजा अग्रभूमिमा शुरुदेखि छ।
टनी बेशक अब आमाबाबु वा सवारी साधनको नेतृत्वमा छ। निस्सन्देह, साना व्यक्तिहरू जनावरको जिम्मेवारी छैन, उनीहरूलाई मात्र गति सिक्न र जान्दछन् परिचित हुनु पर्छ।
5 बाट उमेर त्यसपछि यो भट्टिङ्ग संग जान्छ। घाँटीमा चल्ने एक काठको घोडामा यहाँ सानो चालहरू छन्। यसैले छोराछोरीले खेतको ढोकादेखि डराउँछन्।
Vaulting सामान्यतया काठको ट्रेलमा अभ्यास गरिन्छ। समूहमा, केटाकेटीहरूले टोलीको मनोभाव विकास गर्न र एक समूहलाई अनुकूल गर्न सिक्दछन्।
9 बाट जीवनको वर्ष, बच्चाले अब गोदामको तयारी गर्दै जान्छ जस्तै किडिंग र पुल र जनावरको हेरविचार। अब रेजिहरूले बिस्तारै बच्चाहरूलाई आफ्नै हातमा दिइन्छ, त्यसैले तिनीहरू पहिलो आज्ञाहरू सिक्न। यो प्रायः लन्टेननटर्रिच द्वारा समर्थित हुन्छ।
लगभग एक वर्ष पछि, समुदाय सँगै सवारी हुन्छ। उत्साहजनक आमाबाबुले हालै यो खेललाई सिकाउँछन्। त्यसैले सवारी साधनमा अर्को अवकाश हरेकको लागि एकदमै रमाइलो हुन्छ।
बच्चाहरु को लागि आदर्श पालतू | पाल्तु जनावर र
रंग पृष्ठहरू घोडाहरू र सवारी
अजनबीहरू कहिल्यै नजानुहोस् - तपाईंसँग भन्नको लागि सिक्नै पर्छ